गच्छदारको चार पार्टीबाट १२औँ पटक सत्तारोहण – Himalaya TV
Home » समाचार » गच्छदारको चार पार्टीबाट १२औँ पटक सत्तारोहण
गच्छदारको चार पार्टीबाट १२औँ पटक सत्तारोहण
काठमाण्डौ २६ बैशाख । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन्। योसहित उनी १२औं पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका छन्।
लोकतान्त्रिक फोरमलाई गच्छदारसहित ३ मन्त्रालय दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सरकारमा सहभागी गराएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन्।
१५ पुस ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेर सत्ता–यात्रा सुरु गरेका गच्छदार २६ वर्षमा १२ औं पटक मन्त्री बनेका हुन्। गच्छदार ४ मंसिर ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट निर्वाचित भएका थिए।
दर्जन पटक मन्त्रीको कुर्सीमा बसेका गच्छदारले मन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि सर्वप्रथम रोज्ने निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय हो। उनले अहिलेसम्म ६ पटक यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर, तथ्याङ्क हेर्दा मन्त्रालयको नाम भने पटक–पटक फेरिएको छ। उनी पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ०५२ मा मन्त्री बन्दा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय रोजे। त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा पनि उनलाई त्यही मन्त्रालय दिइयो। थापा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि गच्छदारले सो मन्त्रालय छाडेनन्।
त्यसपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मन्त्रालयको नाम फेरेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय बनाइयो। ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका गच्छदारले त्यही मन्त्रालय रोजे। प्रचण्डले राजिनामा दिएपछि बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी त्यही मन्त्रालयमा मन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भए। यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि गच्छदारले सोही मन्त्रालय रोजेका थिए।
यो मन्त्रालय बाहेक गच्छदार एक पटक सञ्चार राज्यमन्त्री, एक पटक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, दुई पटक जलस्रोत मन्त्री, एक पटक गृहमन्त्री र अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
सोमबार उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसंगै गच्छदार ४ पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। गच्छदार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा ०६६ मा गठित सरकारमा पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि उनी डा. बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको वेला उपप्रधानमन्त्री बने।
गच्छदार १५ जेठ २०६५ मा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि निर्माण भएका ७ मध्ये ५ सरकारमा सहभागि भए। ०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको बैठकले १५ जेठ ०६५ मा नेपाललाई गणतन्त्रान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा दुई पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गरी ७ सरकार बने। ति मध्ये गच्छदार खनाल र कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मात्र सहभागी भएनन।
गच्छदार अहिलेसम्म चार पार्टीका नामबाट मन्त्री बनेका छन्। उनी २०५९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका नेताका रुपमा मन्त्री बने। २०६५ मा तत्कालिन एमाओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट मन्त्री बने। २१ वैशाख ०६६ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि ११ जेठ ०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। नेपाललाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा फोरमभित्र विवाद भयो। त्यही विवादका कारण गच्छदारले पार्टी फोडेर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरी नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना र निर्माण मन्त्री बने। त्यही पार्टीबाट डा. भट्टराई र ओली नेतृत्वमा पनि मन्त्री बने। अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको नामबाट मन्त्री बनेका छन्।
यो खबर नयाँ पत्रिकामा छ।